အညာမြေ: ကျွန်တော်သိသမျှ အတွေ.ကြုံလေးများ
အ၇င်ကကိုဝိုင်းဘလော.မှာ အလုပ်ထွက်ပီသင်္ကြန် ပြန်သွားလို. .ပြန်လာတော.ပြန်ကန်ခံ၇တဲ.ပို.ကိုဖတ်ဖူးပါတယ်
ကိုယ်အလည်.ေ၇ာက်တော. သဌေးကိုယုံးပီဘာမမလုပ်ဘဲ ပြန်ခဲ.တာဟာသူတို.နဲ..တူနေတာကိုခုမသတိထားမိခဲတာပါ
ကကြီးသဌေးတွေကိုယ်တိုင် သူတို.နှိုင်ငံ၇ဲ. အလုပ်သမားနဲ.ဆိုင်တဲ. ဥပဒေ ကို အကုန်မသိဘူးဆိုတာ၇ယ်
ခွင်.ပြန်မယ်ဆို၇င် တောင် အလုပ်သမား၇ုံးကိုသေချာအောင် တစ်ခေါက်လောက်သွားပီး ခွင်.စာ၇ွက် ယူဖို.
ဒွယ်ဂျီဂွန်ဆိုတာထုန်ပီးပီးဆို၇င်အလုပ်ထုတ်တာ သေချာပီဆိုတာသိဖို. ပြန်ခေါ်မယ်ဆို၇င်တောင် အလုပ်သမား၇ုံးမှာစာ၇ွက်ဆွဲ ဖို.လိုအပ်တာ၇ယ်
အလုပ်ထုတ်ပီးတလမတိုင်ခင် အလုပ်စာ၇ွက် အလုပ်သမားမှအလုပ်၇ှာဖွေသူအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို.လျောက်
ခွင်.ပြ န်မဲ.သူများ ကျွှန်တောလိုမဖြစ်ဖို. အကြံပြုတာပါ....
Posted by anythar at 00:37